Safal Khabar - लकडाउन : किसानका दूध खेर जाँदै , उपभोक्ताले खान पाएनन्
लकडाउन : किसानका दूध खेर जाँदै , उपभोक्ताले खान पाएनन्
बिहिबार, १३ चैत २०७६, १४ : १७
काठमाडौँ । कोभिड -१९ (कोरोना भाइरस) को सम्भावित जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न देशव्यापि ‘लकडाउन’ भएपछि यसको असर दुग्धजन्य क्षेत्रमा परेको छ । किसानको घरमा दुध खेरा जान थालेको छ । अर्काेतर्फ उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ]
सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्ने सवारी साधनलाई छुट दिएपनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । किसानले दुध उत्पादन गरेपनि अधिकांश डेरी र अन्य पसल बन्द हुंँदा वितरणमा समस्या परेको किसानको भनाइ छ । व्यवसायिक पशुपालक दुग्ध उत्पादक कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले दुग्ध सङ्कलन केन्द्रले दुध नै नलिदाँ समस्या परेको जानकारी दिनुभयो । “दुधको उत्पादन छ के गर्नु सङ्कलन केन्द्रले दुध नै लिन मान्दैनन ।”उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष न्यूरेका अनुसार डीडीसीको सङ्कलन केन्द्रले नै दुध नलिएका कारण समस्या भएको हो । साथै चोकर दाना पनि पाउन छाडिएपछि चौपायलाई समेत बचाउन गाह्रो परिरहेको छ ।
काठमाडौबाट दुध बोक्ने ट्यांकर नआएको र स्थानीय दुग्ध उद्योगहरु पनि बन्द भएका कारण थप चिन्तामा रहेको किसानको गुनासो छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङघका सचिव किशोर बगाले दुध सङ्कलन र वितरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थप चिन्ताको बिषय रहेको बताउंनुहुँन्छ । “उपभोक्ता नै घरबाहिर निस्कदैनन् । सरकारले यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ” उहाँले भन्नुभयो ।
आफूले बारम्बार काठमाडौका नीजि डेरीलाई दुध लिन आग्रह गरेपनि दुध लिन नआएको उहाँको भनाई छ । दुधको माग भएपनि आफूले डेरी पसल खोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको साना डेरीका सञ्चालकहरु बताउँछन् । मांँ शक्ति डेरीका सञ्चालक लोकनाथ सापकोटा डेरी खोल्यो पसलमा मानिसको भीड हुने हुँदा आँफैलाई डर हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
गंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था पनि आजबाट बन्द भएको व्यवस्थापक रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “खोलेर मात्र के गर्नु दुध बिक्रीनै हुदैन ।” उक्त सहकारीमा दैनिक ५ हजार लिटर दुध बिक्री हुदै आएको थियो । किसानबाट सङकलन गरे पनि दुध बिक्री नभए पछि सङकलन गर्न छाडिएको हो ।
जिल्लामा दैनिक ३ लाख लिटर दुध उत्पादन हुदै आएको छ । यहांँको उत्पादनको ४५ प्रतिशत खपत भएपनि बांँकी दुध काठमाडौं जाने गरेको छ । यहांँ झण्डै ५०० व्यवसायिक दुग्ध उत्पादक फार्म रहेका छन । भिजन डेरी उद्योग प्रा.लि.भरतपुरका प्रबन्धनिर्देशक सुजन अधिकारी दैनिक चार हजार पाँच सय लिटर दुध बिक्रि हुने गरेकोमा आज दुई सय लिटर मात्र बेच्न सकेको बताउनुहुन्छ । सहकारीबाट ल्याउनेदेखि उपभोक्तासम्म पु¥याउन समस्या नै समस्या भएकाले काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १ ठिमुरामा रहेको चितवन मिल्कमा नीजि डेरीहरुले सङकलन गरेको दुध प्रशोधन गरि पाउडर वनाउँदै आएको भए पनि बुधबारबाट उद्योग वन्द भएको छ । उद्योगमा प्रयोग हुने रसायनको अभाब र मजदुर तथा कर्मचारी सहज आवागमन गर्न नपाएपछि उद्योग बन्द भएको जनाईएको छ ।
शनिबार, २२ चैत २०७६, १० : १५ मा अद्यावधिक गरिएको
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट चीनभरी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजार ११८ पुगेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरुले...
प्राकृतिक विपत्तिका साथै समयसमयमा फैलिने रोगजन्य प्रकोपको...
एयर इन्डियाको दोस्रो विशेष विमानले चीनको उहानबाट...
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको पुष्टि भएको...
१. प्रशासकीय अधिकृत नै क्वारेन्टाइनमा बस्न न्नमानेपछि...
२. भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएकी युवतीको नतिजा नेगेटिभ
३. अमेरिकामा एकै दिनमा कोरोनाले १ हजार ४ सय जनाको ज्यान लियो
४. फेरि लकडाउन समय थप्न सुझाव
५. सरकारकै संरक्षणमा मौलाउदैं भ्रष्टाचार, आफुखुसी ठेक्का
६. कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ५९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
७. फोब्र्सको सूचीमा परेकी गल्फ खेलाडी प्रतिमा भन्छिन्, ‘कोरोनाले खुशी साँट्नै पाइनँ’
८. नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को प्रक्षेपण
९. दिन भरिमा कतिजनाको हुन्छ त कोरोना परीक्षण ?